धन को रानी | Coinfalls क्यासिनो
धन को रानी
धन को रानी प्रदान गर्ने एक शानदार स्लट खेल हो 117,649 जीत Megaways. माथि संरचित6एक्स7रील ग्रिड, यो ठूलो समय खेल संचालित सौन्दर्य पूर्ण रील wilds र एक Reel क्लोन सुविधा आउँछ. ग्राफिक्स स्पष्ट कटौती र रत्न मणि-studded प्रतीक रील adorning तिनीहरूलाई एउटा शाही महसूस छ.
ठूलो समय खेल अनलाइन क्यासिनो खेल उद्योग मा एक नयाँ प्रवेश्य छ र अब पनि अनलाइन ब्लेक र रूले सम्म दस स्लट खेल जारी छ. अष्ट्रेलिया मा मुख्यालय, सिडनी, तिनीहरूले विश्वभर फैलाउन विश्व प्रसिद्ध क्यासिनो को रूप मा ग्राहकहरु छ. आफ्नो खेल बीस भन्दा बढी भाषामा संसारको विभिन्न भागमा बोलिने उपलब्ध छन्.
धन को रानी एक अद्वितीय रील संरचना आउँछ एक धेरै प्रभावशाली देख स्लट खेल हो. यो संग6संग रील7यो प्रत्येक कब्जा प्रतीक. यी प्रतीक बाजको टाउको को आँखा समावेश, Scarabs, साथ ra ज्वेल्स जङ्गली रूपमा कार्य गर्ने रानी आफु. सम्पूर्ण रुप र खेल को महसूस classy छ र शानदार सबै को एक सूचक. यो mesmerizing रानी आधार खेल मा कुनै पनि जीत को लागि एक 7x गुणक पैदावार र चाँडै पूर्ण रील जंगली बनाउन एक रील मा सबै प्रतीक प्रतिस्थापन. तपाईं प्रयोग गरेर विजेता संयोजन त्यसैले यदि2जंगली रील, तपाईं एक सुन्दर 49x गुणक प्राप्त. The pyramid symbol is the only symbol that pays even if you land two of them on the adjacent reels. त्यहाँ जंगली लागि बाहेक अन्य नौ प्रतीक र छवटा खेल कार्ड प्रतीक सहित छन्. आफ्नो पेआउट गर्ने paytable बटन मा क्लिक गरेर जाँच गर्न सकिँदैन.
रील क्लोन सुविधा कुनै पनि स्पिन मा अनियमित ठाँउ लिन्छ. यहाँ रील छ समान रील सम्म उत्पादन गुणा. यसबाहेक, पूर्ण जंगली रील पनि गुणन सम्म उत्पादन5पूर्ण जंगली रील र अनियमित गुणक सेट तिनीहरूलाई लागू हुन्छ.
Megaways प्रदान 117,649 विजेता संयोजन बनाउने तरिका. यो किनभने बढेको रील संरचना i.e मात्र सम्भव छ6रील र7प्रतीक ग्रिड.
धन को रानी को खेलाडी प्रतिशतमा एक राम्रो सभ्य रिटर्न छ 96.9. प्रयोग न्यूनतम शर्त खेल्न यो छ 0.20 र अधिकतम छ £40.
धन को रानी प्लेयर गर्न सभ्य जीत प्रतिज्ञा एक धेरै राम्रो देख मिश्रको-THEMED स्लट छ. पूर्ण रील जंगली र Reel क्लोन सुविधाहरू धेरै प्रभावशाली छन् र यसलाई प्ले गर्दा तपाईं विस्तृत मनोरञ्जन गरौं.